Plywood tsy misy lakaoly? Ny plywood tsy misy fotony no mitarika ny teknolojia
Ny Plywood dia fitaovana vita amin'ny birao misy sosona maromaro vita amin'ny veneer namboarina avy amin'ny ampahan'ny hazo na hazo manify namboarina avy amin'ny kianja hazo ary nopetahan'ny adhesives, ary iray amin'ireo fitaovana mahazatra amin'ny fanaka. Na izany aza, ny ankamaroan'ny adhesives hazo nentim-paharazana dia resin synthetic a ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny tabilao sy ny solaitrabe
Blockboard. Blockboard dia misy tabilao fototra sy ny tampon'ny tabilao mafy. Birao ifotony manaparitaka ny hazo avy amin'ny lath, amin'ny ankapobeny mampiasa karazan-karazany mitovy na fananana mitovy amin'ilay karazany. Ny sakan-tsoratry ny fifehezana ny votoatin'ny birao fototra ...
Ny niandohan'ny Sulong Wood
Tao anatin'izay taona faramparany izay, Pizhou, miankina amin'ny harena an-tsitrapo poplar an'ny faritra eo an-toerana sy ny manodidina, dia nanangana indostrian'ny fanodinana tontonana, tantsaha maromaro amin'ny fanazarana fizarana hazo no nanangona renivohitra, lany hevitra ara-barotra. Ny governemanta Pizhou ...